३१ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : कुनै पनि कुराको सीमित खानु स्वास्थ्यका लागि लाभदायी मानिन्छ । चाहिने भन्दा बढि कुनै पनि कुरा सेवन गरे हानी गर्दछ । तर मानिसको स्वाद माथिको […]
३१ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : हरेक महिला आफ्नो फिगर परफेक्ट होस् भन्ने चाहन्छन् । यसका लागि महिला विभिन्न प्रकारका उपायको पनि सहारा लिन्छन् । सुगठित शरीरले मानिसको व्यक्तित्वमा निखार ल्याउँछ […]
२९ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : बाँझोपन महिलाहरूका लागि गम्भीर समस्या बन्दै गइरहेको छ । प्रजनन क्षमतामा कमी आउँदा गर्भाधान गर्न समस्या हुने गर्छ । महिलामा विभिन्न कारणले गर्दा बाँझोपनको समस्या […]
२८ भाद्र, २०७८ एजेन्सी : वर्षौंदेखि बेसार सुन्दरताका सामाग्रीहरुमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विशेषगरी एन्टिअक्सिडेन्ट र एन्टिइफ्लामेट्री कम्पोनेन्ट पाइने भएकाले यसले छालामा हुने विभिन्न समस्यालाई हटाउन मद्दत गर्छ । […]
२८ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : विश्वभर मुटुरोगको खतरा तीव्ररुपमा बढ्दै छ। प्राय महिलामाभन्दा पुरुषमा हृदयघात हुन्छ भने छ जुन धारणा विल्कुल गलत छ। यसबाहेक पुरुषमा ४० वर्षपछि र महिलामा ४५ […]
सम्भोग पछि पिसाब गर्नु किन आवश्यक ?
२८ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : के तपाईलाई थाहाँ छ, सम्भोगपछि पिसाब गर्नुपर्छ भन्नेरु यदि थाहा छैन भने जानी राखौ सम्भोगपछि पिसाब गर्नु स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले उचित मानिन्छ । जसले तपाईलाई निकै […]
दैनिक यस आसन गर्दा शरीरको प्रत्येक अंगलाई पुग्छ फाइदा, थाइराइडका बिरामीका लागि वरदान
२८ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : सामाजिक संजालबाट शवको अर्थ हो मूर्दा । शवासनमा शरीरलाई मूर्दाजस्तै अचल र स्थिर राखिन्छ । यस आसनको उद्देश्य शरीरलाई शिथिल पार्दै गहन विश्रामको अवस्थामा पु¥याउनु […]
२८ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : कलेजोमा बन्ने मैनजस्तो पदार्थलाई कोलेस्ट्रोल भनिन्छ । कोलेस्ट्रोल रगत र कोशिकाहरूमा पाइन्छ । शरीरका कोशिकाहरू, तन्तुहरू र अङ्गहरूमा हर्मोन, भिटामिन डी र पित्त थैलीमा पाइने […]
२७ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : एक अध्ययनका अनुसार रातमा बारम्बार बिउँझिने महिलाहरुको कम उमेरमा मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । ८ हजार पुरुष र महिलाहरूमाथि गरिएको एक अनुसन्धानले उक्त तथ्य […]
२७ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : मानिस स्वस्थ्य रहन र ताजापन महशुस गर्न राति मिठो निन्द्रा लाग्न आवश्यक छ । निन्द्रा लागेर मात्र हुदैँन निन्द्रा पर्याप्त हुन पनि आवश्यक छ । […]
हड्डीको समस्याबाट बच्न के खाने ?
२३ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : शरीरलाई तन्दुरुस्त राख्नका लागि विभिन्न प्रकारका भिटामिनहरुको फरक–फरक भूमिका हुन्छ । जसमध्ये भिटामिन डीले शरीरका हड्डीहरुलाई मजबुत बनाउने काम गर्छ । भिटामिन डीको कमिले हाडजोर्नी […]
पाठेघरको समस्याबाट बच्ने उपाय
२३ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : महिलामा सबैभन्दा बढी देखिने समस्या मध्ये पाठेघरको मुखको क्यान्सर पनि प्रमुख हो । क्यान्सर मात्र नभई पाठेघरमा विभिन्न समस्याहरु देखिन सक्छ । नेपालमा हरेक बर्ष […]
२१ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : शरीरमा आइरनको कमीले एनिमिया रोगको खतरा हुन्छ । मानिसहरू एनिमियालाई सामान्य समस्या मानेर अनदेखा गर्छन् । तर, समयमा यसको उपचार नगर्ने हो भने यो गम्भीर […]
२१ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : कोभिड-१९ र स्क्रब टाइफसको लक्षण मिल्दोजुल्दा हुन्छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय कोभिडका बिरामीसँगै स्क्रब टाइफसका बिरामी देखिन थालेका छन् । कोभिड […]
सवारी चलाउदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु
२१ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : कहिलेकाहिँ सवारी चालकले ध्यान नपुर्याउँदा वा लापरबाही गर्दा दुर्घटना हुनसक्छ । यात्रामा निस्कदा सवारीचालकले सामान्य कुरामा ध्यान नपुर्‍याउँदा सवारीमा आएको समस्या कै कारण यात्रा खल्लो […]
यी ९ कुरा सधै गोप्य राख्नु पर्दछ
२० भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : आयु, धन, घरको रहस्य, गुरुमन्त्र, मैथुन, दान, मान, अपमान एवं औषध यी नौ कुरालाई हरहमेशा गोप्य राख्नुपर्छ । आयु मानिसले आफ्नो आयुका विषयमा जो कोही […]
२० भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : विशेषज्ञ तथा पोषकविद्हरुले स्वस्थ रहनका लागि पाचन प्रणाली सन्तुलित हुन आवश्यक भएको बताएका छन् । त्यसैले पाचन प्रणालीलाई सही राख्न के–के गर्ने विषयमा विशेषज्ञका सल्लाह […]
शरीरका विभिन्न अंगबाट किन निस्कन्छ आवाज ?
२० भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : हाम्रो बोलीमा मात्र होइन शरीर चल्दा वा कुनै कार्य गर्दा शरीरबाट विभिन्न प्रकारको आवाज आउँछ । कतिसम्म भने सुतिरहेका बेला पनि शरीरबाट आवाज निस्कन्छ । यी आवाजमा […]
१९ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : गर्मीको मौसममा मानिसमा देखिने एउटा प्रमुख समस्या हो, टाउको दुख्ने । यो मौसममा मािनसमा अत्यधिक मात्रामा टाउको दुख्ने समस्या हुने गर्दछ । तर यसलाई सामान्य […]
१८ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : अभिनेत्री ऋचा शर्मा रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन–२’ बाट बाहिरिएकी छन्। उनले आमा बन्ने मिति नजिकिएपछि शोबाट विश्राम लिएकी हुन् । गर्भवती ऋचाले उत्कृष्ट तीन प्रतियोगी […]
१७ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : भोक लाग्नु, तिर्खा लाग्नु आदि शरीरका स्वभाविक प्रतिक्रिया हुन् । भोक लाग्दा पेट भित्रबाट फरक प्रकारको आवाज आउँछ । त्यति मात्र होइन भोक लागेको समयमा […]
१७ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : विज्ञान भन्छ, विपरित ध्रुबहरु आपसमा आकर्षित हुन्छन् । विज्ञानको यो सूत्र जीवनमा पनि काम लाग्छ । तर ईमान्दार हुनका लागि विज्ञानका अलावा, जीवनमा दर्शन पनि […]
फलफुल के कसरी खान सकिन्छ
१५ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : राम्रो स्वास्थ्यको लागि पोषणयुक्त खानेकुरा खानु जरूरी छ । सही आहार राम्रो स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । सही पोषक तत्वयुक्त खाना सही मात्रा र सही […]
१५ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : प्राय नेपालीको भान्सामा पाकिरहेको तरकारी हो, चना । चनाको तरकारी, रस, भुटेर, अन्य तरकारीमा पकाएर खान सकिन्छ । चना कमजोरी हटाउन, ताकत र ऊर्जाकालागि निकै […]
१५ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : महिला र पुरुषको शरीर बाह्य रुपमा जसरी भिन्न हुन्छ त्यसरी नै आन्तरिक अंगको बनावट र क्रियाशैलीमा पनि अन्तर हुन्छ । यद्यपी, अधिकांश पुरुषलाई महिलाको शरीरबारे […]
खाना कसरी स्वादिलो र पोषिलो बनाउने ?
१३ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : खाना, जसले पेटको भोक शान्त गर्छ । खाना पोषण हो, जसले शरीरलाई चलयामान राख्छ । खाना औषधी हो, जसले शरीरलाई निरोगी राख्छ । खाना अमृत […]
दही खादाँ हुँदा हुने फाइदा
१२ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : अधिकाशं नेपालीले भोजनमा दहीको समावेश गर्दछन् । यसको स्वाद संगै यसबाट प्राप्त हुने स्वास्थ्य धेरै छन् । दहीको सेवनले शरीरमा धेरै प्रकारको लाभहरु मिल्दछ । […]
१० भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : निरोगी रहनका लागि खानेकुरामा ध्यान दिन जरुरी छ । स्वस्थ जीवनशैली र खानपानमा ध्यान दिँदा धेरै रोगहरुबाट बच्न सकिन्छ । तर, खानेकुरा खाँदा बारम्बार गरिने […]
चियासँग जोडिएका यी ६ अफवाहरु वास्तविकता के हाे ?
९ भाद्र, २०८९ काठमाडौँ : के तपाईं चियाको शौखिन हुनुहुन्छ ? धेरैजसो मानिसहरुलाई चिया असाध्यै मनपर्छ । यहाँसम्म कि धेरैजसोले आफ्नो दिनको सुरुवात चियाबाटै गर्छन् । यतिमात्रै होइन, धेरै मानिसहरु […]
९ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : एलोभेरा सौन्दर्य प्रशाधन एवं स्वास्थ्यको क्षेत्रमा परिचित नाम हो । यो क्याक्टस प्रजातिको एक बिरुवा हो, जो गर्मी एवं सुक्खा जलवायुमा उब्जाउ हुन्छ । यो […]
सांकेतिक तस्वीर ९ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : संसारभर अगष्ट १ देखि ७ सम्म विश्व स्तनपान दिवस मनाइदै छ । यस अवधीमा महिलालाई स्तनपानबारे जानकारी दिइन्छ । स्तनपान सम्बन्धी फैलिएका केही भ्रम […]
स्वस्थ जीवनका लागि हप्तामा कतिपटक सेक्स गर्ने ?
९ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : यौनसम्पर्क गर्नुको अनेकौं फाइदा छन् । नियमित सेक्स गर्नाले विभिन्न रोगसँग लड्ने शक्ति बढाउँछ । अध्ययनका अनुसार नियमित यौन सम्पर्कले स्तन र प्रोस्टेट क्यान्सरको जोखिमलाई कम […]
क्वाँटी खानुभयो ? यस्ता छन् फाइदा
६ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : हिन्दु धर्मालम्बीहरु परापुर्वकालदेखि श्रावण शुक्ल पूर्णिमामा मानिआएको पर्व हो, जनैपूर्णिमा । धार्मिक मान्यता अनुसार जनैपूर्णिमामा व्रतबन्ध गरेकाहरुले जनै फेर्ने र क्वाँटी खाने प्रचलन छ । […]
जिन्दगीलाई कसरी सहज बनाउने पाँच तरिका ?
५ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : हाम्रो जीवन धपेडीमा वित्छ । बिहान उठ्नसाथ हामीलाई कुनै न कुनै कामले छोप्छ । दिनभर दौडधूप गर्छौं । भेटघाट, कामकुरो, कामधन्दा आदिको यसरी चक्कर लगाउँछौं […]
एक समलैंगिकको पीडा, ‘उनीहरुले मलाई देख्नसाथ गोली ठोक्नेछ’
५ भाद्र, २०७८ काठमाडौँ : तालिबानले अफगानिस्तानमाथि कब्जा गर्नुअघि पनि समलैंगिक अब्दुल (परिवर्तित नाम)को जिन्दगी खतरामा थियो । यदि उनले कुनै गलत व्यक्तिलाई आफ्नो लिंगबारे गोप्य कुरा चुहाएका भए अफगानिस्तानको […]